निश्पक्ष नेपाली कता गए ?
हामी मानवीय चेतना भएका नेपाली हौ, अनि मात्र यो वा त्यो हाँै । बाबुआमाको पृष्ठभूमिको आधारमा जन्मनासाथ बच्चालाई उताको र यताको भनेर कित्ताकाट गरिन्छ । फलस्वरुप ऊ पनि पछि गएर आफ्नो अभिमत राख्दा स्वतन्त्र मानवभन्दा पहिला काङ्ग्रेस वा बामपन्थी भएर राख्छ । राजनैतिक पुर्वाग्रहले उस्को स्वतन्त्र बिचारको घैटोमा बिर्को लगाइदिन्छ र ऊ बैचारिक अपाङ्ग हुन्छ ।
आहा ! बर्खे बिकास
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । असार महिना भर्खर सकियो र यो महिना नेपालको लागि निकै नै महत्वपूर्ण मानिन्छ । कारण हामी नेपालीको मुख्य बाली धान यसै महिनामा रोपिन्छ । महिनाको अधा आधीमा धान दिवस समेत् धान रोपेर, दही चियुरा खाएर र बिबिध साङ्गितिक कार्यक्रम गरेर मनाईन्छ । यो महिनामा हामी धान रोप्न कँही छोड्दैनौ । काठमाडौंकै बिभिन्न स्थानका बासिन्दाले सडकमै रोपाई गरेर उक्त कुरा पुष्टि गरिसकेका छन् । कृषिप्रधान देश भईकन यति पनि फाईदा लुट्न सकिएन भने त के काइदा? असारैभरि रोपाईको नाममा हिलोमा लडिबुडी खेल्दै रमाउने कलाकार र मोडलहरुको पनि देशमा खाँचो भएन । जनप्रतिनिधिहरु पनि सस्तो लोकप्रियाताका लागि कोदालो लिएर बाउसे गर्न र घुम ओडेर बिँउ काढ्न पछि परेनन् । Road construction in the rain: Asar's Development रोपाईलाई फगत मनोरञ्जनको रुपमा लिनु हाम्रो दुर्भाग्य हो । खेतका कुनै गह्रामा बाजा ध्वजाका साथ ५ सय भन्दा बढीले रोपाई गरेको नाटक मन्चन भईरहँदा लाखौं किसानका फाँटहरु लाठे र रोपाहारको अभावमा बाँझो पल्टन तयार भईरहेको यथार्थता हामीले भुल्नु हुँदैन । एकदिन रोपाँईको मज्जा लुट्नेले धानको फसल
विश्वकप फुटबल २०१८ को अन्त्यतिर आइपुग्दै गर्दा त्यो टिन् एजको सुरुवाती क्षणहरु झल्झल्ती सम्झना आँउछ जतिखेर विश्वकप फ्रान्समा भएको थियो र फ्रान्सले नै जितेको थियो । १९९८ साल थियो त्यो । किशोर अवस्थामा जस्तो क्रेज शायद अरुबेला हुँदैन होला, कुनै खेल हेर्न छुट्दैन थियो । प्रायः सबै खेलाडीका नाम कन्ठष्थ थिए । डेभिड बेखेम, रोनाल्डो, रिभाल्डो, रोबर्टो कार्लस, जिनेदिन जिदान, गाब्रिएल बाटिस्टुटा त्यतिखेर चर्चित नामहरु थिए । सेमी फाइनल खेल ब्राजिल र नेदर्ल्यान्ड्स अनि फ्रान्स र क्रोयसिया बिच भएको थियो । गाँउ गाँउसम्म विश्वकपको बेग्लै रौनक थियो । ठाउँ ठाउँबाट फुटबलका बालटोलीहरु मैदानमा निस्कँन्थे । फुटबल हेर्नका लागि टी भी हुनेको घरमा मान्छेहरुको लाभा लश्कर नै हुन्थ्यो । प्राय चार गाँउ भरीमा एउटा घरमा टी भी हुन्थ्यो । रङ्गिन टी भी हेर्नु परे त चार कोस पर कलाँतीको बासुको घर पुग्नु पथ्र्याे । त्यही घरमा फेरी भोटे कुकुर पालेका थिए ।
विश्वकप दर्शन नियमावली २०१८
विश्वकप फुटबल घरेलु दर्शक महासंघको केन्द्रीय कार्यालयको मुख्य सुचनापाटीमा प्रकाशित् मिति २०७५ असार १ । गत जेष्ठ ३१ गतेदेखि रसियामा जारी फिफा विश्वकप फुटबल हेर्ने दौरानमा गाँउ, समाज र विशेषगरी घर परिवारमा हुनसक्ने असमझ्दारी, झैझगडा वा किचलोलाई न्युनिकरण गर्ने हेतुले विश्वकप दर्शन ऐन २०१४ को प्रस्तावनालाई टेकी सर्वसाधारणका घरघरमा शान्ती र अमनचयनका साथ विश्वकप हेर्ने वातावरण श्रीजनार्थ विश्वकप दर्शन नियमावली सार्वजनिक गर्न वान्छनीय भएकोले विश्वकप फुटबल घरेलु दर्शक महासंघले देहाएका नियमहरु बनाएको छ ।
आजसम्म भकुण्डो पर्या छैन खुट्टामा कस्ले जित्ने कस्ले हार्ने बाजी बिथ्थामा । मेस्सी गयो अर्जेन्टिना, गयो रोनाल्डो म्याच हेर्दा हानाहान भो खुस्क्यो डँडाल्नो । ३२ इन्चको टी भी किन्यो ऋण काढेर दिनरात वर्ल्डकप हेर्ने रोपाँइ छाडेर । उठेदेखि नसुतुँञ्जेल लाग्यो विश्वकप खान छैन निस्तो च्युरा मुखमा कपाकप । चुनावताका प्रतिद्वन्दी कांग्रेस एमाले जनता सिद्दे ब्राजिल र अर्जेन्टिनाले । एउटै बलको पछि लाग्छन् पुरै २२ जना विश्वभरका मान्छे बिग्रे हेर्दै जोखाना । नाम कण्ठै कोष्टा स्वारेज् एम्बाप्पे नेमार पाठ्यपुस्तक फिट्टु आँउन्न जाँचमा बिमार । जर्मन हारे, स्पेन हारे यता केको रोइलो? खेल्छन् राती चोकचोकमा “गोल” को भैलो । जो सुकैले जितोस कप हाम्लाई केको बाल? आफ्नै देशले खेल्न पाँउन्न अझै पचास् साल ।। ©Rabindra Adhikary अनुमती बिना कपी पेस्ट गर्नु अपराध (प्लेजरिजम) हो ।
हरेक ब्यक्तिमा केही न केही कुराको रस पसेकै हुन्छ । फुट्बलको रस त झन धेरैमा अलि गढेरै पसेको हुन्छ । खेलाडीहरुलाई खेलप्रति विशेष दिल्चस्पी त हुनेनै भयो, त्यस्का डाई–हार्ड फ्यानहरुलाई पनि प्रत्येक बर्ष बाह्रै मास कुन कपमा कुन टिमले कति गोल हान्यो भनेर दिनरात पिरलो हुन्छ । त्यस्ता फ्यानहरुसँग एक छिन् कुरा गर्नासाथ फुट्बलतिरै कुरा मोड्छन् अनि फुट्बलको बारेमा बात मार्न पाए घन्टौं बितेको चाल् पाँउदैनन् । खेल खेल्न वा हेर्न छोडिदिनुस्, फुट्बलको गफ गर्नमा पनि त्यति आनन्द छ ।